Nin weerar khasaaro badan geestay ku qaaday Goob Mingiska lagu tumo oo kutaala Muqdisho | SMC
Home WARARKA MAANTA Nin weerar khasaaro badan geestay ku qaaday Goob Mingiska lagu tumo oo...
Nin weerar khasaaro badan geestay ku qaaday Goob Mingiska lagu tumo oo kutaala Muqdisho
Nin hubeesan ayaa lagu soo waramayaa in rasaas xoogan ku furay goob mingiska lagu tumo oo kutaala Degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir, waxaana weerarkan ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Goobjoogayaal ayaa ku waramay nin ku hubeesnaa qorayga AK-47 dadka qaarna sheegeen in uu ahaa askari ayaa rasaas ku furay goobta mingiska lagu tumo oo kutaala agagaarka Masjidka xaaji Yuusuf.
Inta la xaqiijiyay weerarkan waxaa ku dhintay labo qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 10-qof kuwaa oo la sheegay in qaarkood qabaan dhaawacyo culus loona qaaday xarumo caafimaad.
Ninka weerarka geestay ayaa la sheegay in goobta ka baxsaday, waxaana goobta dadka shacabka lagu weeraray soo gaaray ciidamo booliis ah kuwaa oo bilaabay baaritaano ku aadan weerarkan iyo sababta keentay.
Booliiska iyo maamulka degmada Warta Nabada ayaan wali ka hadlin weerarkan khasaaraha badan geestay , lamana oga ilaa hada sababta keentay weerarkaasi ninka hubeesan geestay ku qaaday goobta shacabka joogeen.
Previous articleSargaal Katirsanaa Nabad Sugida Soomaaliya Oo La Dilay (Magaciisa)
Next articlePuntland oo iska fogeysay in ay kasoo horjeedo in Soomaaliya laga qabto doorasho qof iyo cod ah